हिमेश बज्राचार्य का लेखहरु
हिमेश बज्राचार्य, भाद्र १६, २०७४
हिमेश बज्राचार्य, वैशाख ३०, २०७४
हिमेश बज्राचार्य, आश्विन १०, २०७३
पञ्चकन्या तेजले सोमबार वाईवाई ईपीएल ट्वान्टी ट्वान्टी क्रिकेटमा लगातार दोस्रो जित निकाल्यो र प्रतियोगितामा अहिलेसम्म आफूलाई सर्वाधिक बलियो टिम सावित गर्‍यो । दोस्रो जितका लागि पञ्चकन्याले टीयू क्रिकेट मैदानमा कलर्स एक्स–फ्याक्टरलाई सजिलै २३ रनले हरायो ।
हिमेश बज्राचार्य, माघ २३, २०७२
पेप ग्वार्डिओलाको फुटबल सिद्धान्त अरूभन्दा बेग्लै छ । उनको काम गर्ने शैलीका खास–खास विशेषता छन् । जस्तो, बार्सिलोनामा चार वर्ष रहँदा उनले कुनै पनि मिडियालाई प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता दिएनन् । उनी ‘प्री’ र ‘पोस्ट’ म्याच कन्फ्रेन्सलाई नै पर्याप्त मान्छन् ।
अब कोच ‘जिजु’
हिमेश बज्राचार्य, पुस २५, २०७२
युरोपेली क्लब फुटबलका सबैभन्दा अनुभवी प्रशिक्षकमध्ये एक हुन्, राफेल बेनिटेज । उनको त्यो अनुभवसँगै सफलता पनि उत्तिकै जोडिएको छ । र, जिनेदिन जिदान– आधुनिक फुटबलका महान् खेलाडी । उनी त्यसै महान् भएका होइनन् । भनिन्छ, उनको खेलमा कला लुकेको हुन्छ ।
हिमेश बज्राचार्य, चैत्र २३, २०७१
दुई सय वर्षभन्दा अगाडिको नेपाल भाषा कस्तो थियो होला ? मल्लकालको अन्त्यतिर चलनचल्तीमा रहेको बोलीचालीको भाषा कस्तो हुँदो हो ? त्यति बेलाका शब्द अहिले पनि उत्तिकै प्रयोगमा छन् अथवा हराएर गए ?